Ellicott Dredges In Archives Action - Pejy 2 ao amin'ny 5 - Ellicott Dredges
Ponce de Leon Inlet, FL- Crews dia nahazo alalana avy amin'ny tafika amerikanina tafika amerikana (USACE) hanomboka ny fandatsahan-drano ao amin'ny Ponce de Leon Inlet. Izany dia tokony hanome azy antoka kokoa mba hivezivezana ireo anglers. Ankoatr'izay, ny dredging dia hanolotra fihinana fanampiny amin'ny morontsiraka ho an'ny morontsiraka eo akaikiny. Ny Atitany mihitsy dia tsy notazonina hatramin'izay folo taona mahery hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny Corps. Ireo izay miasa eo amin'ilay tetikasa dia efa nanomboka ny fanetsiketsehana ny tetik'ady fanalam-barotra valo volana naharitra. Raha ny tena izy, ireo mpikambana ao amin'ny mpiasa ao amin'ny tetikasa dia asaina manala ny saika ...
Maninona no ilaina ny fanondranana ranomasina?
Ireo mpamily mamakivaky ny Sea Dog Creek any akaikin'ny tanànan'i Hempstead, New York, dia afaka mizotra soa aman-tsara any amin'ny rijan-dranomasina miaraka amin'ny toerana mora amin'ny faritany mafana amin'ity fahavaratra ity; na izany aza, tsy izany foana no nitranga. Tamin'ny taona 2012, ny tondradrano namboarin'ny Superstorm Sandy dia nanjary saika tsy ho vitan'ny sambo ara-barotra lehibe ny hivezivezena ireo rano mitoto eo anelanelan'ny faran'ny atsinanana amin'ny Ranomasin'ny Ranomasimbe any akaikin'i Long Creek. Ny mpiasa eo an-toerana avy ao amin'ny sampandraharahan'ny fikajiana sy ny lalambe dia nampiasa lalamby Ellicott 460SL "Swinging Dragon®", fantatra amin'ny anarana hoe "Hempstead Bays" hanesorana ny 8,000 cubic yds³ (6,116 m³) fasika avy amin'ny ...
Inona no ilana ny fananganana moka manokana?
Tamin'ny taona 2017, mpanjifa solika iray nanantona an'i Ellicott Dredges momba ny fananganana ny fantsom-pananganana herinaratra Bucketwheel namboarina manokana. Ny dredge natao manokana dia natao namboarina mba hiatrehana ny toe-javatra toy ny tany efitra. Ny mpanjifa dia nisafidy Ellicott Dredges miorina amin'ny traikefan'i Ellicott sy ny lazany amin'ny famolavolana sy ny fananganana dredge hiasa amin'ny tontolo sarotra sy manahirana. Ny fahitana ny vahaolana ho an'ny olana sarotra, ny fanamby lehibe indrindra atrehan'ny ekipa avy any Ellicott dia ny fahaizana mitondra tondra-drano 1MM lb. (453,592.3 kg) amin'ny antsasaky ny erantany. Nandritra ny dingana fiandohan'ny tetikasa dia nisy ekipa avy amin'ny fizarana Projects Ellicott lehibe niasa ary nahita ...
Nahazo fanabeazana fanodinana ny mpanjifa Malawi
Ellicott Dredges Hosts EGENCO Dredge Training Ellicott Dredges dia nanolotra ekipa mpiasam-panjakana avy amin'ny Orinasa famokarana herinaratra ao Malawi (EGENCO, LTD). Nandritra ny fitsidihany roa herinandro, ny vahiny nasaina dia nandray anjara tamin'ny fampandehanana dredge, fikarakarana maotera, rafitra fanaraha-maso hidradrika, ary programa fiofanana amin'ny dredge hafa izay nanomana azy ireo hanaovan-tena amin'ny làlam-pandehanana izay ampiasain'ny Ellicott Dredges amin'izao fotoana izao. Malawi's Newest Dredge Ellicott Dredges dia manamboatra modely Dragon® Series 1270 18 santimetatra ho an'ny EGENCO eo ambany fifanarahana avy amin'ny kaonty Millennium Challenge-Malawi. Nandritra ny fitsidihan'izy ireo dia hitan'ny olona hihaona ilay dredge amin'ny dingana fanomanana farany. Ny 1270 ...
Iza avy no maniry ny Dredge namboarina hafanana?
Niandry tamim-paharetana ny mponin'ny distrikan'i Barnstable, Massachusetts fa ho tonga ny Sand Shifter Dredge vao mainty. Tapitra ihany ny fiandrasan'izy ireo. Tonga tao Falmouth Harbour (Farmouth Harbour) ilay marika vola 2 tapitrisa dolara vaovao naorin'i Ellicott Dredges any Maryland. Faly ny rehetra ny tetikasa. Raha ny marina, vonona ireo tompon'andraikitra amin'ny seranan-tsambo haneho ny sangan'asa vaventy vaovao ho an'ny besinimaro amin'ny ankapobeny. Ny Sand Shifter hialana amin'ny fanandramana farany amin'ny Derniera Ny ekipa iray avy amin'ny Ellicott Dredges dia manao fitsapana mialoha amin'ity herinandro ity. Ny ekipanay dia miasa mandritra ny famantaranandro mba hahazoana antoka fa milamina ny zava-drehetra ...
Nanambara ny Superior Dredging ao Illinois fa efa mandeha ny tetikasan'ny Dredge 2017 tany Jimmerson Lake, Indiana. Ny asa, tarihan'ny marika Ellicott Swinging Dragon® vaovao antsoina hoe "JENNY-KAY", dia nanomboka tamin'ny Site 1 nataon'ny tohatra tany West Bachelor Road tamin'ny herinandro lasa teo. Hanohy ny asany amin'ny fantsona mankany atsinanana. Ity faritra ity dia andrasana mandritra ny 3 herinandro. Hatramin'ny niasa dia hidina mankany amin'ny faran'ny atsimo farihy ny asa ho an'ny tetikasa telo misaraka. Amin'ny manaraka dia ho toy ny saika mangina ao amin'ny fantsona manaraka ny lalana 101D voalaza fa Site 8. Avy any, ny ...
Ny Barnstable County dia maniry anao hanome anarana ny Dredge vaovao
Ny fandaharan'asan'ny Barnstable County Dredge dia nanentana fanentanana manome ny tombontsoa ho an'ny besinimaro hisafidy ny anaran'izy ireo. Ny sambo Ellicott izao dia eo am-panamboarana ao Baltimore, Maryland ary antenaina fa handeha amin'ny vatany ho any amin'ny cape indray aorian'ny volana manaraka. Nanazava ny fanapaha-kevitra ny lehiben'ny mpanolotsaina monisipaly ao amin'ny faritany. "Noheverinay fa haverinay amin'ny mponina ao Barnstable County ny hanao fanentanana mahafinaritra mba hahitana raha afaka manonona anarana izahay, fa tsy ny hoe misafidy anarana fotsiny ho anay, dia azonay fa tsara ny mitondra fahalalana vitsivitsy. .
Ny fanjakan'i Ohio Dredge Fleet dia mametraka firaketana an-tsoratra
OHIO, Etazonia - Ny departemantan'ny harena voajanahary tany Ohio (ODNR) vao tsy ela akory dia nahavita ny vanim-potoanan'ny fanondranana taona 2016, ary nesorina amina mirefy iray tapitrisa mahery (apprec. 1 m765,000) akora misy rano maloto avy amin'ny faritry ny zaridainam-panjakana sy ny fananam-panjakana hafa. Ny lalànan'ny dredge an'ny fanjakana dia ao amin'ny mody Ellicott Model 3SL misy dredge mitaingina tohatra. Ny halavan'ny sedra 460 tapitrisa taonina no tena nesorina teo amin'ny tantaran'ny programa dredging an'ny fanjakana. Ny talen'ny ODNR, James Zehringer, dia manasongadina ny fahombiazan'ny fanalan'ny ODNR ho an'ny mpiasa voatokana ary ny tetikady stratejika ho an'ny fananana, izay manatsara ny fidirana amin'ny boater ary ...
Dredges Ellicott roa miasa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny biby
DELAWARE, Etazonia - Ny dredges Ellicott 460SL roa dia ampiasaina amin'ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny lehibe ao amin'ny Prime Hook National Wildlife Refuge any Delaware. Ity no iray amin'ireo tetik'asa famerenana amin'ny marsa lehibe indrindra any atsinanan'i Etazonia Ny tetikasa dia hamerina ny tontolo iainana vaika simba / valan-dranomasina simba izay misy rihana manodidina ny 4,000 hektara (1618.7 ha) ao anatin'ny rafitry ny famoahan-drano teo aloha teo amin'ny fialofana. Io famerenana amin'ny laoniny amoron-tsiraka io dia manatsara ny fahafahan'ny fialofana amin'ny fiatrehana ny tafio-drivotra sy ny haavon'ny ranomasina ary manatsara ny toeram-ponenan'ny vorona mpifindra monina sy ny biby hafa. Iray amin'ireo drogady Ellicott 460SL roa miasa ...
Ellicott dia manambara tanteraka ny andiany vaovao 2070 Dragon® Dredger
BALTIMORE, MD - Faly i Ellicott raha manambara volavola vaovao 20 "(500 mm) fanamainana fanidiana, ny Series 2070 Dragon® dredge. Ny dredger vaovao dia manararaotra ny teknolojia moderina maoderina ary fomba famolavolana mandroso. Ity atiny ity dia hanolo ny malaza 1870 Dragon Series ho toy ny fenitra Ellicott sy 20-dredge. "Ity dia endrika maoderina sy mahomby indrindra raha tsy misy sorona ny fahaiza-manao, ny fiainana ela ary ny vidin'ny famokarana avo izay nantenain'ny tompon'ny 1870," hoy i Paul Quinn, filoha lefitry ny varotra amin'ny Ellicott. "Rehefa naharitra 18 volana ny fampandrosoana, ity no tena ...